Progressive Voice Myanmar » Myanmar Mechanism Launches Website in English and Myanmar Languages
Press Release 141 Views
July 30th, 2020 • Author: United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar •2minute read
Geneva, 30 July 2020 – The United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar today launched its website, iimm.un.org, to further bolster its public outreach efforts.
The website, in the English and Myanmar languages, will serve as one of the main platforms in the Mechanism’s effort to provide accurate and timely information about its mandate and work to various audiences in Myanmar and internationally.
In addition to information on the Mechanism’s Terms of Reference and process, the website will include in-depth features on thematic issues related to the Mechanism’s mandate. The Mechanism will regularly update its website with news on its activities, including its annual report to the Human Rights Council and the General Assembly, official missions and participation in events.
The website launch is part of the Mechanism’s broader public outreach effort which follows the Mechanism’s earlier outreach initiatives. In early 2020, it also conductedacivil society survey to understand the knowledge and perspectives of key Myanmar civil society actors andasmall number of international experts, and to facilitate initial institutional engagement with victim groups, advocates for accountability and their allies. In October 2019, the Mechanism published its Fact Sheet, which addressed frequently asked questions from interested stakeholders. In May 2020, it released its inaugural Bulletin,apublication which will be issued regularly to highlight initiatives and provide updates on the progress of its work.
The Mechanism believes that the website will facilitate awareness raising and understanding of its mandate and work and foster dialogue with relevant stakeholders. By strengthening its engagement with Member States, civil society groups and other organizations, the Mechanism hopes to encourage them to contribute to its mission of delivering justice to the people of Myanmar.
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖွင့်လှစ်
ဂျီနီဗာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရားသည် ပြည်သူလူထုနှင့် ကမ်းလင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ကြိုးပမ်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် ထပ်ဆင့် အထောက်အကူပြုစေရန် ၎င်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် iimm.un.org ကို ယနေ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပြီး၊ ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကြောင်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း၍ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ပြည်သူများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသိပေးနိုင်ရန်၊ ယန္တရားက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သတင်း အချက်အလက် ဖြန့်‌‌‌‌၀ေရာနေရာ အများထဲက တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ယန္တရား၏ လုပ်ငန်းတာ၀န် သတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်တို့အပြင် ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အဓိက အကြောင်းအရာများကို ကျယ်ပြန့်စုံလင်စွာ အလေးပေး ဖော်ပြသွားမည်။ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီနှင့် အထွေထွေညီလံခံသို့ တင်သွင်းသည့် ယန္တရား၏ နှစ်စဥ်အစီရင်ခံစာ၊ မစ်ရှင်များ နှင့် ယန္တရား ပါဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံး သတင်းများကို ပုံမှန် တင်ပြသွားမည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းမှာ ပြည်သူလူထုနှင့် ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ ကမ်းလင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ယန္တရား၏ ကြိုးပမ်းမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤ ကြိုးပမ်းမှုသည် ယန္တရား၏ ကနပိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကမ်းလင့်ဆက်သွယ်ခြင်း အလုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
(၂၀၂၀) ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ယန္တရားသည် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင် စစ်တမ်းတစ်ရပ် ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဓိကကျသည့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ် အနည်းငယ်၏ အသိပညာနှင့် အမြင်ရှုထောင့်များကို နားလည်ရန်နှင့် ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ ကျူးလွန်မှုအတွက် တာ၀န်ခံမှုရှိစေရန် ဆော်သြလှုပ်ရှားသူများ၊ သူတို့၏ မဟာမိတ်များနှင့် ယန္တရားတို့ ကနဦး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူချောမောစွာ လုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် ယင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ယန္တရားသည် ၎င်း၏ အချက်အလက်စာစောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းစာစောင်တွင် သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက သိလို၍ မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားထားသည်။ ( ၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ မေလတွင် ယန္တရား၏ ပထမဦးဆုံးသော အဖွင့် သတင်းလွှာကို ထုတ်‌‌ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းလွှာကို ပုံမှန်ထုတ်‌ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ‌ ယန္တရား၏ အစပြု လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု နောက်ဆုံး အခြေအနေများကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကြောင်း အသိမြင်တိုးကာ နားလည် သဘောပေါက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယန္တရားတို့ကြား ဆွေးနွေးမှုကို အကျိုးပြုစေမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယန္တရားအကြား ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုကို အားကောင်းအောင် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူများအတွက် တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကျဥ်းပေးမည့် ယန္တရား၏ အထူးတာ၀န်ကို ၎င်းတို့ ဘက်မှလည်း ပံ့ပိုးကူညီစေရန် အားပေးရာ ရောက်ကြောင်း ယန္တရားက မျှော်လင့်သည်။
ဤ မြန်မာဘာသာပြန်သည် ကုလသမဂ္ဂက တရား၀င် ဘာသာပြန်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။